Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nikolas Kay | UNSOM
10:06 - 13 Jul
New York, 12 Sebtember 2013 – Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u Qaabilsan Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii lagu qaaday gaariga Axmed Maxamed Islaam Madoobe, oo ah Hogaamiyha Maamulka Ku-meelgaarka ah ee Jubba. Axmed Maxamed Islaam ayaa la sheegay in uu ka badbaaday weerarka culus oo lagu soo qaaday oo wax dhaawac culus ma gaarin. Hase ahaatee , waxaa weerarka ku dhintay waardiyayaashiisa iyo dad kale oo waxa aan waxba galabsan, kadid markii gaarigii Axmed Madoobe lagu dhuftay gaari kale oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Weerarkaasina waxaa uu ka dhacay Magaaladda dekadda leh ee Kismaayo, ee ku taalla koonfurta Soomaaliya.
130912 12 Press Statement on attack on Islam Madobe (Somali).pdf
 Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa hambalyo u diray Madaxwaynaha, Dowladd
 SRSG, Nikolas Kay oo ka hadlaya weerarkii is qarxinta lahaa ee ka dhacay Muqdishuo maanta